Mogadishu Journal » Is-mari-waa u dhaxeeya ciidamada Liyuu iyo kuwa federaalka Itoobiya
Mjournal :-Wararka laga helayo dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan degmada Dhagax-buur ayaa waxa ay sheegayaan in ciidanka Liyuu Boolis iyo Millatariga Itoobiya ay isku hor fadhiyaan halkaasi.
Arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib xiisadii ka dhalatay sida magaalada Jigjiga looga waday Madaxweyne hore Cabdi Maxamed Cumar oo hada la soo sheegayo inuu xabsi guri ku yahay magaalada Addis Ababa.
Ciidanka Liyuu Boolis ayaa la sheegay inay ka gadoodeen qaabkii Ciidanka Itoobiya ay magaalada Jigjiga uga kaxeeyeen Cabdi Maxamuud Cumar, waxaana labadan dhinac ay yihiin kuwo is hor fadhiya.
Masuuliyiin ka tirsan dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen in mar walba laga baqdin qabo in dhinacyadan uu dagaal dhexmaro, maadaama dadaalo badan oo la sameeyay lagu guul dareystay in la kala qaado.
Dhinaca kale waxaa caadi ku soo laabtay ganacsigii iyo isu socodkii magaalada Jigjiga oo todobaad marti gelisay xiisad colaadeed oo sababtay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed.